ပူးပေါင်းပါဝင်၊ အရှိန်မြင့်တင်၊ မြေတောင်မြောက်ပေး စီးပွားရေး
နောက်တစ်ခေတ်၏ မြန်မာ အင်တာနက် စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများအား မွေးထုတ်ပေးလျက် ရှိသည်။
Letter from the Judging Committee to App Competition participants Feb | 16
The winners of ideabox App Competition were announced on our Facebook page yesterday. Withatotal of 29 submissions from the student and open categories, this was the first Android app development competition organised by ideabox Myanmar.
Android Bootcamp 2014 Recap Feb | 16
The first of its kind in Myanmar, App Contest isapublic mobile app development competition with attractive prizes and even better perks: technical feedback from international experts, along with publicity and distribution help from Ooredoo Myanmar. The first App Contest saw great entries in both student and open categories, find out about them here.
Code for Change Myanmar – “Business Solution” Hackathon
ideabox AppBus Program
ideaBox App Competition
ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိ ဝါရင့်ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်သည့် ကွန်ရက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးကို လှုပ်ကိုင်နိုင်သူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ စီးပွားရေး အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များပါဝင်သော လမ်းပြသူ ကွန်ရက်သည် ဒေသတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်သူများကို အကြံဉာဏ်ကောင်းများ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။
ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းနှင့် အရှိန်မြင့်တင် ပေးခြင်း
ကျွန်တော်တို့တွင် ရှိသော အကောင်းဆုံး အရှိန်မြင့်တင်ပေးမှု နှင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှု အစီအစဉ်များဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် လုပ်ငန်း အသစ်အသစ်များကို ဖြစ်ထွန်းစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့် စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ နှင့် အခြားသော စီးပွားစတင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော အရာများကို အိုင်ဒီယာမှသည် ကုန်ပစ္စည်း ထွက်ရှိသည် အထိ ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်ုပ်တို့ ideabox နေရာသည် စီးပွားစတင်သူများ အတွက် လေ့လာသင်ယူရန်နှင့် စိတ်ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်။ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှ လူပါင်းစုံနှင့် ကွန်ရက်များကို သယ်ဆောင်လာပေးပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင် လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို တိုးပွားလာစေရန် ဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။
ideabox Myanmar မှ နောက်ဆုံးသတင်းများကို သိရှိနိုင်ဖို့ အီးမေးလ်ဖြင့် စာရင်းသွင်းကြစို့